राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ प्रदेश एकले विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु(कन्सल्ट्यान्सी)लाई दर्ता, अनुगमन र अनुमती दिने गरी शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा परीक्षण सम्वन्धी निर्देशिका निमार्ण, प्रदेश स्तरिय संघ, संस्थाहरुलाई दर्ता सम्वन्धी व्यवस्थापन गदैं आएको छ । यसले दर्ता भएका संस्थाहरुकलाई नियमन अनुगमन गरी स्वीकृती प्रदान जस्ता ६ बुदे माग पत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत भइसकेको छ । यस संस्थाको नेतृत्व प्रदेश १ का युवा व्यवसायी मोहन तिगेलाले गरिहेका छन् । लामो समयदेखी धरानमा ‘इडेन एकेडेमी शैक्षिक प
१,३७७ पटक पढिएको
साउनको महिना शुरु भएसँगै शिव मन्दिरहरूमा चहल–पहल बढ्ने गर्दछ । साउन महिनामा शिवलाई जल अर्पण गरे मोक्ष प्राप्ति हुने जनविश्वास रहिआएको छ । धरानको पिण्डेश्वर बाबाधाममा पनि २०३९ सालदेखि जल चढाउँदै आइएको छ । साउन महिनामा मात्र यहाँ ४ देखि ५ लाख भक्तजनले जल अर्पण गर्छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुरसहित भारत विहार, बङ्गाल सिक्किमबाट भक्तजन जल चढाउनका लागि आइपुग्छन् । भक्तजनको चापलाई सुगम बनाउन पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिले हरेक वर्ष उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसै विषयमा पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिका अध्यक्ष विकासकुमार बनेपालीसँग ब्लाष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः – बोलबमको महिना आयो
१,३१७ पटक पढिएको
यहाँ धार्मिक पर्यटनको रूपमा पिण्डेश्वर, दन्तकाली, बूढासुब्बा, पञ्चकन्याजस्ता नेपालमै कहलिएका मठ–मन्दिर रहेका छन् । प्रदेश नम्बर १ कै प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना रहेको धरानमा पछिल्लो समय पर्यटनका विभिन्न सम्भावनाहरूको खोजी गरी र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, साइक्लिङ, बाइकिङ, क्यानोनिङ, हाइकिङ, जङ्गल सफारीजस्ता विभिन्न प्याकेज टुर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । धरानको पर्यटकीय सम्भावनाका विषयमा धरानमा होटल सेछ तथा सेछ ट्राभल्स एण्ड टुर्सको नाममा व्यवसायिक पर्यटकीय गतिविधि गरिरहेका पर्यटन व्यवसायी वासुदेव बरालसँग गरिएको कुराकानी: आजकाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? पर्यटन व्यावसायी भएकाले पर्यटन गतिविधि
१,३४२ पटक पढिएको
सेप इभेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिले विगत १२ वर्षदेखि नेपालको विभिन्न ठाउ“हरूमा भारतीय शैक्षिक मेला आयोजना गर्दै आएको छ । सेपले काठण्माडौं र विराटनगरमा भारतीय शैक्षिक मेला गर्दै आएको छ । नेपालमा लगानी गरी शैक्षिक मेला आयोजना गर्ने यो पुरानो संस्था हो । यस संस्थाले भारतका नाम चलेका विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई नेपालमा ल्याएर प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीहरूलाई भेटाउने गर्दछ । प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको शैक्षिक मेला काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि विराटनगरमा यही सोमबारदेखि विराटनगरस्थित नमस्कार होटलमा दुई दिने १३ औं सेपले भारतीय शैक्षिक मेला गर्दैछ । अन्य शैक्षिक मेलाभन्दा फरक मेला भएको दाब
लामो समदेखि भारत, बेलायतमा नेपालीहरूले गोर्खा सैनिक कार्यरत छन् । पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धमा लाखौं गोर्खाहरूले विभिन्न मुलुकमा वीरगति प्राप्त गरे । जहाँ–जहाँ युद्ध भयो त्यहाँ वीरगति प्राप्त गोर्खाहरूको समाधिस्थलहरू अहिले पनि छन् । जस्तो इटाली, फ्रान्स, जर्मन, बर्मा, मलेसियामा संरक्षित अवस्थामा छन् । सन् १९९७ मा बेलायतले चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि हङकङमा पनि रहेको करिब पाँचसय बढी गोर्खा र उनीहरूका सन्ततीको समाधिस्थल संरक्षित रहेको छ । सोही समाधिस्थललाई हङकङमा बस्ने नेपाली समुदायले आफ्ना पुर्खालाई स्मरण गर्ने माध्यम बनाएका छन् । तिनै समाधिस्थलको नाममा गोर्खा सेमेस्ट्री ट्रस्ट हङकङले विभिन्न
१,९२० पटक पढिएको
पहिलो पटक फक्ताङ्लुङ मिडिया हाउसद्वारा आयोजित एसईई स्टेट वान सिङ्गिङ रियालिटी शो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शिक्षा र सङ्गीतलाई जोड्ने अभियान स्वरूप प्रदेश–१ का विभिन्न जिल्लाहरूबाट अडिसनमार्फत् छनौट गर्दै विद्यार्थीहरूको अन्तरनिहित प्रतिभा उजागर गर्ने उद्देश्यले आयोजित प्रतियोगिताको फाइनल जेठ ३१ गते धरानको सभागृहमा हुँदैछ । यही सेरोफेरोमा मिडिया हाउस प्रा.लि.का अध्यक्ष डम्बरकुमार तुम्वापोसँग ब्लाष्टकर्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः एसईई स्टेट वान सिङ्गिङ रियालिटी शोबारे बताइदिनुहोस् न ?–यो एक नम्बर प्रदेशमा पहिलो पटक हामीले एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरूको प्रतिभा उजागर गर्न सोचक
– तपाईंलाई त सबैले जित्छ भन्छन् के छ त्यस्तो जित्ने आधारचाहिँ ? विगत २० वर्षदेखि उद्योगीव्यवसायीको हितमा रातोदिन नभनि काम गरेको हुँदा सबै उद्योगव्यवसायी माझ परिचित भएकाले व्यवसायीले जिताउँछन् भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु । – जित्ने यतिका विश्वास हुँदाहुँदै नेकपाले तपाईंलाई अध्यक्ष उठायो नि, किन ? नेकपाले अध्यक्षको रूपमा उठाएको होइन, हामी चार जना उम्मेदवार थियौं । पवन अग्रवाल र राजकुमार राईले मलाई समर्थन गर्दा व्यपारा सङ्गठनले समर्थन गेको हुँदा र केही नेकपाको साथीहरू हुनुहुन्छ । नेकपाले नै चाहिँ उठाएको होइन, समर्थनचाहिँ पार्टीको हो उठाएको चाहिँ होइन । –
१,२९३ पटक पढिएको
व्यापारीहरूकाे संस्थामा पार्टीकाे प्रतिनिधि भएर जान मिल्दैन : विजय श्रेष्ठ
प्रकाशित मितिः जेठ १३, २०७६
१,७३० पटक पढिएको
कुनै बेला धरानको ‘डन’ भनेर चिनिने दिनेश राईको परिचय अहिले त्यो छैन । विगतको नकरात्मक परिचयको ढोबलाई पूरा गर्न उनी कुन न कुनै हिसाबले सामाजिक गतिविधिका क्रियाशील छन् । युवाहरूलाई कुनै न कुनै रोजगारीमा संलग्न हुनु पर्दछ, स्वरोजगार हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राखेर बेरोजगार युवाहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहन गर्छन् । यति बेला त्यो बेलाको दिन बद्लिएको छ । उनको परिचय पनि बद्लिएको छ । तायामा सप्लायर्स् सञ्चालन गरेर व्यवसायी पहिचान बनाएका छन् । पछिल्लो समय त झन उनी व्यवसायीहरूको हकहितका लागि काम गर्न सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघमा जाने तयारी थालेका छन् । आगामी जेठ २७ गते सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको
४,५२१ पटक पढिएको
‘पूर्वमा पत्रकारितामात्रै पढ्छु भन्दा अझै पनि त्यस्ता कलेज छैनन्। त्यसैले हामीले सिक्ने भनेको अग्रजहरूको सङ्गत, सामिप्तयता र स्नेहले हो। जो सधैं आफ्ना अनुजका लागि मार्गनिर्देशक बन्छन्। हर्ष सुब्बाको अन्तर्वार्ता लिनु ‘सिक्नु’ हो। तसर्थ यो मेरो सिकाइ हो। आफूले मात्र हाईस्कुलको अध्ययन सकेका तर पनि समाज र पत्रकारिताका विश्वविद्यालय पर्गेलेका हर्ष सुब्बालाई मैले पत्रकारिताका हाइस्कुल भनेर शुरुमै भनिदिए“। यो एउटा सिकारुको दुस्साहस हो। हर्ष सुब्बालाई यी चार शब्दले ‘गहिरो अन्याय’ पनि गर्न सक्छ, तर पनि यो एउटा सिकारुको चार अक्षर क्षम्य हुन सक्छ। सुधार गर्ने अरु अग्र
१,७४४ पटक पढिएको